Muxuu yahay welwelka Beesha Caalamka ee Doorashada Soomaaliya? | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Muxuu yahay welwelka Beesha Caalamka ee Doorashada Soomaaliya?
Muxuu yahay welwelka Beesha Caalamka ee Doorashada Soomaaliya?
War kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa looga hadlay is marin waaga ka taagan Doorashada Soomaaliya oo muddo ahaan dib uga dhacday 2020 oo ah waqtiga loo qorsheeyay in ay bilaabato doorashada Kuraasta Labada Aqal BFS balse aysan dhicin sabab la xiriirta khilaafka taagan.
Qoraalka Beesha Caalamka ayaa isugu jiray Bogaadin, Talo soo jeedin & digniin, waxaana ay soo jeedisay la gudagalo howsha doorashada iyada oo halka laga duulayo laga dhigayo heshiiska 17-ka September 2020 oo ay wadajir u saxiixeen Madaxweynaha DFS, Madax Goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koofur Galbeed & Hir-Shabeelle, isla markaana labada aqal BFS uu cod ku taageeray.
“Beesha Caalamka ayaa saamilayda siyaasadeed ugu baaqeysa in ay muujiyaan hoggaan iyada oo la tixgelinayo danta umadda & in ay si dhakhso leh u xalliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta iyada oo loo marayo isu-tanaasul, si loosii guda galo geedi-socod doorasho oo lagu kalsoonaan karo oo u dhaca sida ugu dhaqsiyaha badan” ayaa lagu bilaabay qoraalka Beesha Caalamka.
Warsaxaafadeedka Beesha Caalamka ayaa lagu bogaadiyay tallaabooyinka qaar ee dhicisoobay iyo kuwa curdinka ah ee la isugu soo dhaweynayo dhinacyada isku khilaafsan hab maamulka Doorashada sida dedaalada uu sameeyay Ra’iisul Wasaare oo tagay Puntland & Galmudug, Madaxweyne Qoor-Qoor oo isku howlay isu keenidda dhinacyada kala aragti duwan & Madaxda DFS.
“Saaxiibadu waxay garwaaqsanyihiin in Heshiiska 17kii Sebtember ay ansixiyeen Dowladda Federaalka ah, dhammaan Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah iyo labada gole ee Baarlamaanka, waxaana sidoo kale soo dhoweeyay musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxweyne. In kasta oo saaxiibada iyo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka niyad jabeen in hanaankan uu aad uga hooseeyo doorashooyinka “qof-iyo-cod” ah, ayaa haddana heshiiska 17kii Sebtember wuxuu yahay aasaaska kaliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021” ayaa lagu yiri qoraalka Beesha Caalamka kasoo baxay.
“Ma jiri karo dib u furid lagu sameeyo Heshiiska 17-kii Sebtember ama abuuritaanka hanaan kale ama mid barbar-socda. Waxaa loo baahan yahay in is-faham ballaaran oo loo wada dhanyahay laga gaaro hirgelinta [heshiiskaas] si loo xaqiijiyo kalsooni lagu qabo geeddi-socodkan. Tani waa in ay la jaan-qaaddo ballan-qaadyadii lagu heshiiyay ee shirkii Madasha Iskaashiga Soomaaliya. Saaxiibadu waxay soo dhaweynayaan dadaallo dardar-gelin leh oo sida ugu dhakhsiyaha badan loogu xalliyo arrimaha taagan, looguna soo gabagabeeyo is-faham la gaaro maalmaha soo socda, si ay doorashadu u bilaabato dabayaaqada bishan”. Ayaa lasii raaciyay qoraalka Beesha Caalamka.
Beesha Caalamka waxaa shalay gaartay warqad uga timid Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021, kadib markii waqti xileedka Dowladda uu aad usoo dhawaaday, iyada oo aysan jirin tallaabooyin dhanka doorashada ah oo la qaaday, xitaa aan la xalin muranka taagan oo bilooyin qaatay.
Previous article“Trump waxa uu halis ku yahay Dadka & Dalka Mareykanka” Ilhaan Cumar.
Next articleItoobiya oo digniin u dirtay dowladda Sudan